Ny kodiarana diamondra dia voasokajy ho an'ny seramika, résin, mpanotana vy, elektronika, fanosorana, sns.
1. kodiarana fametahana kodiarana: tsara ny fahatsapan-tena, tsy mora ny manakana, mahay mandanjalanja ary tsara tsara, fa ny fatin'ny fatorana dia manana hery tsy ampy, tsy mahavita firavaka amin'ny diamondra, tsy mahatohitra hafanana ary manohitra fanoherana, ka tsy izany mety amin'ny kodiarana kodiarana henjana, tsy mendrika ho an'ny andraikitra mavesatra ...
Kodiarana mikotrika tsy misy fotony
Ny fikorotanana afovoany dia dingana fikosoham-bary OD (ivelany ivelany). Ny kodiarana famotehana tsy misy fotony dia ampiasaina amin'ny famotsiam-bary periferal. Type: 1A1, 6A1, 9A1 Application: simenitra karbôna simenitra, Polycrystallin 1.Product: Diamond Centerless Grinding Wheel, kodiarana vita amin'ny diamondra, Resin Diamo ...
Fampiharana isan-karazany amin'ny familiana kodiarana
Kodiarana diamondra / CBN ho an'ny fatoran'ny CNC Grinder Resin, diamondra avo lenta, teknolojia manokana, nampiasaina tamin'ny fikosoham-bary CNC 5-axis ho an'ny fikorisana ny tungsten carbide na fitaovana vy vita amin'ny vy HSS Diamond / CBN kodiarana ho an'ny mombamomba ny fametahana kodiarana vita amin'ny diamondra sy CBN kodiarana amin'ny fitaovana hafa. toy ny ste ste ...
Kodiarana mitoto: Lehibe: 100 * 20 * 16100 * 30 * 16 Fitaovana: vatan-tsoratry ny fahitalavitra nahita kofehy vita amin'ny kodiarana vita amin'ny kodiarana novokarin'ilay orinasa, mety hahatratra ny haavony bebe kokoa. Noho izany, aorian'ny fahatapahana, ny roloky ny taratasy dia tsy misy sisin-dàlana henjana, mangotra ary zava-mitranga mainty. kojakojan-jiro ho an'ity manaraka ...
Sady mifangaro fikosoham-bary
Miaraka amin'ny lazan'ireo milina tsiro maro samihafa, ny kalitaon'ny tsipika fahita dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny fanodinana sy ny vidin'ny fahitana ny famindrana. Mandritra ny fampiasana ny fehin-kibo, ny kalitaon'ny fikosoham-bary dia hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny tsipika. Hita mibaribary ny maha zava-dehibe azy. Tamin'ny p ...
Ampiasaina indrindra amin'ny fikosoham-bary an-tampon'ny milina CNC ho an'ny kobam-paty TCT, fantsom-bary mihosotra diamondra ho an'ny vatosoa
Ampiasaina indrindra amin'ny fikosoham-bary ambony amin'ny milina CNC ho an'ny kofera TCT, kodiarana vita amin'ny diamondra ho an'ny karatra tajam-pandehanana, vovo-kodiarana, fikosoham-bary vita amin'ny kodiarana vy, kodiarana fametahana diamondra ho an'ny karbera tungsten, kodiarana fametahana diamondra ho an'ny fitaovana karbônina, toy ny Vollmer, Abm, Rekord . Sinoa g ...
Fanadiovana kodiarana diamondra / Cbn fanadiovana kodiarana ho an'ny fitaovana fanangonam-bolo, 5inch famatorana kofehy famatorana kodiarana ho an'ny famonosana fitaovana famonosana baoritra, Familiana kodiarana ho an'ny fitaovana famonosana, Fomba fikosoham-bary diamondra ho an'ny tungeta karbàla, Maitso kodiarana ho an'ny famonosanana, Carbide boribory ny vatan-tsolika vita amin'ny vy manapaka,